Caawinta GTRCMC waxay ku socotaa Wadada Soo -kabashada Dalxiiska Haiti
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Caawinta GTRCMC waxay ku socotaa Wadada Soo -kabashada Dalxiiska Haiti
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Haiti • Caafimaadka Warka • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Soo -kabashada Dalxiiska ee Haiti
Haiti waxay ku jirtaa dhibaato ka dib markii la dilay madaxweynihii gobolka, ka dib masiibooyin dabiici ah iyo COVID, iyo maalmihii hore dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa uguna xoogga badnaa oo dilay ugu yaraan 724.
Dalxiiska Haiti waxaa laga yaabaa in la tirtiro in muddo ah, laakiin wuxuu weli u yahay aalad dalkan Caribbean -ka inuu ka soo kabsado. Maanta, deris ka yimid Jamaica, ninka loo yaqaan inuu yahay shaqsiga ka dambeeya adkeysiga ereyga dalxiiska ayaa gaaray Haiti, Hon. Edmund Bartlett.
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, iyo Aasaasaha Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC), Mudane Edmund Bartlett, ayaa walaac ka muujinaya saameynta ba’an ee dhulgariirkii 7.2 ee dhowaan ka dhacay Haiti.
Sabtidii Ogosto 14, dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa si ba’an u waxyeelleeyay magaalooyin dhowr ah, oo ku aasay dad ku burburay dhismayaal dumay qaybo ka mid ah Haiti.
Ugu yaraan 724 qof ayaa dhimatay iyada oo in badan oo kalena lagu la’yahay waxa ku haray Haiti. Mareykanka iyo dalal kale ayaa u diray kooxo baadi -goob ah si ay u caawiyaan Dowladda Haiti.
Haddii dhulgariir 7.2 uusan ku filneyn, duufaan kuleyl oo suuragal ah oo dilaa ah ayaa hadda ku wajahan dalkan Caribbean -ka.
“Waxaan u damqanayaa jasiiradda aan deriska nahay ee Haiti maadaama ay ka soo kabaneyso burburkii ka dhashay dhulgariirkii. Dhacdooyinkan cimilada ayaa si aad iyo aad u badan noo muujinaya, in dalka nugul ee Kariibiyaanka ah uu u baahan yahay inuu aad ugu diyaar garoobo maareynta iyo yaraynta marka ay dhacaan, ”ayuu yiri Wasiirka Jamaica Bartlett.
Bartlett wuxuu jecel yahay dalkiisa Jamaica iyo shaqadiisa wasiirka dalxiiska ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku arkay dunida dalxiiska indho caalami ah. Tani waxay Jamaica u keentay safka hore ee dalxiiska meel kasta oo adduunka ah.
Bartlett oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Tani waa sababta GTRCMC waxaa loo abuuray inay ka caawiso waddammada diyaargarowga iyo maaraynta carqaladaha nooc kasta leh si aysan u soo kaban karin oo keliya ee ay u soo kaban karaan si xoog leh.
“Iyada oo qayb ka ah dadaallada lagu bixinayo taageerada, GTRCMC waxay la xiriiri doontaa hoggaamiyeyaasha gobollada si ay ula kulmaan si ay uga wada hadlaan saamaynta dhulgariirka iyo in la baaro saamaynta ay ku yeelan karto dalxiiska Kariibiyaanka, marka la eego saamaynta taban ee ay tani ku yeelanayso nolosha, hab -nololeedyada, iyo ugu dambayn dalxiiska, ”Ayuu raaciyay wasiir Bartlett.
Haiti waxay u baahan tahay wax ka badan kooxaha raadinta iyo taageerada niyadsamida leh. Badbaadada iyo nabadgelyadu waa arrin weyn. Sababtoo ah fallaagada ka hawlgasha waddooyinka soo gala magaalada caasimadda ah gargaarka aadka loogu baahan yahay si fiican looma qaybin karo. Dowladda Haiti waxay weydiisatay Mareykanka inuu gacan ka geysto arrintan booliisnimada, laakiin jawaabta weli waa la sugayaa.
Peter Tarlow, oo dunida laga yaqaan khabiirka amniga iyo amniga dalxiiska, iyo guddoomiye ku-xigeenka Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa lagu sheegay baahinta wararka eTN ee maanta: “Badbaadada iyo amniga dalxiiska ayaa fure u ah meel kasta oo safar loo maro si loo guulaysto. Shabakadda Dalxiiska Adduunka oo leh wacyigelin degdeg ah oo la aasaasay ayaa diyaar u ah inay gacmaha isula shaqeeyaan Wasiir Bartlett iyo GTRCMC si ay u caawiyaan Haiti marka ay diyaar yihiin. ”
The Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Dhibaatooyinka oo uu hoggaaminayo Wasiirka Dalxiiska Jamaica Bartlett waxay ka badan yihiin jawaabta Kariibiyaanka ee masiibooyinka maxalliga ah, laakiin waa hindise caalami ah oo sii kordhaya oo ah meelaha loo dalxiis tago.
Haiti, oo uu ku dhuftay dhulgariir kale oo xoog badan sanadkii 2010 kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 220,000 oo qof, ayaa sidoo kale u diyaargaroobaya weerarada Tropical Storm Grace.
“Sida aan isugu dubaridnay yareynta ilaa bartamaha xilliga dhimista fulkaanaha ee ka dhacay St. Vincent iyo Grenadines, GTRCMC waxay la kaashan doontaa la -hawlgalayaasheena gobolka si loo sii socdo,” ayuu yiri Agaasimaha Fulinta ee GTRCMC, Professor Lloyd Waller.
NASA waxay $ 28 Milyan u qoondeysay Hawlaha Cilmi -baarista Cusub
Kigali ilaa Doha duulimaadyo aan joogsi lahayn hadda waxaa leh Qatar Airways ...
Hindiya waxay soo afjartay dhammaan xayiraadihii safarka, waxay dib u furtay xuduudaha ...
Raiisel wasaarihii hore ee Israa’iil Netanyahu ayaa qorshe qarsoon ku leh ...
Thailand, Jarmalka, Kanada ayaa hadda wadaagaya Dalxiis cusub ...
Hal qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen bas ka dhacay Uganda...
Morocco ayaa mamnuucday dhammaan duulimaadyadii UK, Germany, iyo Netherlands ...
Google waxay ubaahantahay dhamaan shaqaalaha kusoo noqda xafiiska si ...
Dhulgariir Xooggan oo hadda laga duubay Jasiiradda ...
Mizoram -ka Cusub: Meel Dalxiis Joogto ah oo Ammaan leh
Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas waxay ku noqotay ...
Shirkadaha diyaaradaha ayaa qani ku noqon doona duulimaadkaaga dhacaya ...
Macaashka hoteelka ayaa kor u kaca, laakiin ma sidaas ayuu ahaan doonaa?
Nacaybka UNWTO ee WTTC waxaa ku jira Jaceyl Tweeted ...
Dalxiiska Seychelles oo Bilawday Suuq-geynta Sannadlaha ah ee Sanadlaha ah ...
IMEX America: Dhacdada Diirada Cusub ee Shirkadaha
Amiirrada qosolka qosolka Afrika oo u soo kicitimay magaalada ...
Toronto ilaa Las Vegas, Orlando, Tampa iyo Cancun on Air ...
Abaalmarinta Seychelles oo Sheegatay: Goobta Jasiiradda Top ee ...
Saint Lucia waxay u dabaaldegaysaa dib -u -furitaanka Kanadiyaanka ...
Naadiga Habeenkii Ugu Gaarka Badnaa Adduunka LOUIS XIII si uu u bixiyo ...
Waa maxay sababta Jamaica? Jawaabta Mareykanka “Ha ...
New Zealand waxay ku sii socotaa xiritaanka waddanka oo dhan hal COVID…
Ku dheji suunka kursiga ama cajalad duub: Amniga diyaaradda cusub ...
Diyaarad Daad -gurayn oo lagu afduubtay Kabul ayaa lagu waayay Iiraan
Xarunta amaahda cusub ee ay ku dhawaaqday ePlus
Diyaaradaha korontada iyo bumblebees ma duuli karaan
Marka laga reebo Safaris Duurjoogta ah, Hadda Waa Dalxiiska Golf -ka ee ...
Hindiya ayaa kor u qaadday awoodda duullimaadyadeeda 85% ...
Delta Waxay Dib U Bilaabaysaa Duulimaadyadii Atlanta-San José ee Joogsi La'aanta
Universal Beijing Resort ayaa maanta u furan dadweynaha
Costco waxay dib u bilaabi doontaa waraaqaha musqusha iyo biyaha dhalada ...
Jamaica waxay soo dhaweynaysaa 1 milyan oo booqde tan iyo bilowgii ...
Novelist -ka Tansaaniya ee layaabka leh ayaa Abaalmarinta Nobelka ee ...